तपाईं केही दिन सिंगापुरमै बसेर मृगौलाको क्षमता बढाएर देश फर्किनुहुन्छ भन्ने मैले सोही साँझ घर फर्केपछि समाचारहरूबाट थाहा पाएँ । केही हप्ता अघिमात्रै तपाईं सबै ठिक भएको भनेर सिंगापुरबाट फर्किनुभएको रहेछ । मृगौला बिग्रेका हाम्रो स्वास्थ्य यस्तै त हो नि ! आज सञ्चो भोलि के बिसञ्चो हुन्छ, पत्तै नहुने । १२ वर्षअघि तपाईंले मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएको कुरा तपाईं पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको बेला थाहा पाएकी थिएँ मैले । तपाईं निर्वाचित भएपछि मजस्तो मृगौला रोगीमा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविकै थियो ।
त्यसको एक हप्तापछि ममा खुट्टा सुन्निने लगायतका समस्या देखिन थाले । हामी नजिकै भारत सीमावर्ती सहर पुग्यौं । त्यहाँ पुगेपछि बल्ल थाहा भयो— गर्भावस्थामा मलाई प्रिइक्लाम्सिया भन्ने रोगले च्यापेको रहेछ । ढिलै भैसकेछ । रक्तचाप धेरै बढेर मेरो किडनी, आँखा र पेटको बच्चा तीनतिरै हानि गरिसकेछ । आँखाको दृष्टि त दुई दिनपछि फर्कियो, तर मृगौला र बच्चा नफर्किनेगरी सकिए !बच्चाको आस मारिसकेका थियौं, मृगौलाको आस भने मरेको थिएन । नयाँदिल्लीका एम्स र सफदरजंग अस्पतालसम्म पुग्यौं । जीवनभर डायलाइसिस वा प्रत्यारोपण बाहेक विकल्प नबचेको परामर्शसहित हामी फर्कियौं । यद्यपि सफदरजंग अस्पतालका डाक्टरले तुरुन्तै डायलाइसिस गरिहाल्नु नपर्ने पनि भनेका थिए । उनको कुरा चार वर्षसम्म सत्य भयो ।
एक दिन हैन, दुई दिन हैन, हप्तैपिच्छे घरका दुई–दुई जनाको डायलाइसिस ! स्थानीय रेडियोमा काम गर्ने श्रीमानको तलबले धान्ने कुरै भएन । नेपाल सरकार लगायत केही परोपकारी संस्थालाई सहयोगका लागि गुहार्‍यौं । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला हामीजस्ता बिरामीलाई १ लाख रुपियाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको रहेछ ।
त्यो लिन दुईपटक काठमाडौं आउजाउ गर्दा ३० हजार खर्च भयो, तैपनि पैसा पाइएन । पछि तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यो निर्णय नै खारेज गराए भन्ने जानकारी विभागबाट पाएँ । सरकारी सहयोग नपाए पनि विदेशमा रहेका सुदूर पश्चिमेली समाजका दाजुभाइले भने केही आर्थिक सहयोग जुटाएर पठाए । केही दिनको खर्च टर्‍यो ।
६ महिनाको दिल्ली बसाइपछि धनगढीमा डायलाइसिसको पालो पाइने भनेर म फर्किएँ । तर सेती अञ्चल अस्पतालमा नियमित पालो नै पाइएन । अनि कोहलपुरको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा पालो मिलाएँ । विडम्बना, यी अस्पतालमा मेरो फिस्टुला (डायलाइसिस गर्न हातमा धमनीहरूको शल्यक्रिया गरी बनाइने बाटो) बिग्रियो, हेपाटाइटिस सी पनि सर्‍यो । फिस्टुलामा समस्या आएपछि २०७४ भदौमा म फेरि काठमाडौं गएँ । सरकारीमा त यत्तिकै हन्डर थियो, ज्यानको कुरो भनेर काठमाडौंको सुमेरु अस्पताल पुग्यौं । त्यहाँ पनि उस्तै हन्डर खानुपर्‍यो । फिस्टुला सुन्निएर दुखाइ हरेक घन्टा बढिरहेको थियो । अलिकति पनि सञ्चो नभएकाले रचित्तबुझ्दो परामर्श नपाएकाले हामीले फेरि नयाँदिल्ली जाने निर्णय गर्‍यौं ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले भारतकै उपचारमात्र राम्रो भन्न खोजेकी त होइन, तर मेरो अनुभव यस्तै रह्यो । विडम्बना, मेरो देश मेडिकल माफियाको चंगुलमा फँसिसकेको रहेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पनि यहाँको सेवामा विश्वास नभएरै सिंगापुर जानुभएको त होइन ? जे हिसाबले जानुभएको भए पनि ठिकै गर्नुभयो । म पनि धनगढी, नेपालगन्ज, काठमाडौं हुँदै कञ्चनपुरको सिमानामा पर्ने भारतको सानो सहर खटिमामा अहिले डायलाइसिस गरिरहेकी छु । यो सानो अस्पतालको प्राविधिकले पनि फिस्टुला राम्रैसँग चलाएर सेवा दिएको छ ।
मेरो सास त चलिरहेको छ, तर परिवार र श्रीमानमा झन्–झन् जिम्मेवारी थपिएको छ । श्रीमानको जागिरजस्तै मेरो सास पनि अस्थायी नैलाग्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको जस्तै हाम्रो पनि बच्चा छैन । बुढेसकालमा कतै उनी बिरामी परे भने के गर्लान् ? सरकारले त पक्कै हेर्दैन, देखिहालियो । कसले हेर्ला ? म यस्तै कुरा मनमा खेलाउँछु र झस्किन्छु ।